Spam mail အကြောင်းသိချင်လို့ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Internet Problems » Spam mail အကြောင်းသိချင်လို့ [Problem]
1 Spam mail အကြောင်းသိချင်လို့ [Problem] on 12th April 2010, 8:41 pm
သူတစ်ပါး Email ထဲကို spam mail တွေအများကြီးပို့ထားတာတွေ့ဖူးတယ် အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ကြတာလဲဆိုတာသိချင်လို့ပါ
သိသူများရှင်းပြပေးကြပါဦးဗျာ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
2 Re: Spam mail အကြောင်းသိချင်လို့ [Problem] on 12th April 2010, 8:58 pm
Mr.learn wrote: သူတစ်ပါး Email ထဲကို spam mail တွေအများကြီးပို့ထားတာတွေ့ဖူးတယ် အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ကြတာလဲဆိုတာသိချင်လို့ပါ
Email Bomber နဲ့လုပ်ထားတာများလား ................. ထင်တာပြောကြည့်တာ
3 Re: Spam mail အကြောင်းသိချင်လို့ [Problem] on 13th April 2010, 7:15 pm
fake mail သုံးထားတာပါ
4 Re: Spam mail အကြောင်းသိချင်လို့ [Problem] on 13th April 2010, 8:18 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-04-12
fake mail ဆိုတာဘယ်လို mail မျိုးလဲ
ဘယ်လိုပုံစံမျုုိးနဲ ့ပို ့တာလဲဖြေပေးပါဦး
5 Re: Spam mail အကြောင်းသိချင်လို့ [Problem] on 13th April 2010, 9:27 pm
fake mail ဆိုတာ Mail အတုပို ့တာကိုပြောတာပါ
ဘယ်လိုပို ့လဲဆိုတာတော့ ဖိုရမ်ထဲမှာ ရှာကြည့်ပါ
6 Re: Spam mail အကြောင်းသိချင်လို့ [Problem] on 29th April 2010, 12:03 pm
Gmail မှာ ကိုမလိုချင်တဲ့ အကောင့်နဲ့ mail တွေကို Filter လုပ်ကြည့်ပါလား..
အဲလို ၀င်လာတဲ့ mail တွေကို Filter လုပ်ကြည့်ပါလား..လုပ်လို့ရမလားတော့မသိဘူး..
ပြောကြည့်တာနော်... [You must be registered and logged in to see this image.]
7 Re: Spam mail အကြောင်းသိချင်လို့ [Problem] on 26th May 2010, 8:38 am
spam mail ပို့တာက fake mail နဲ့ spam အများကြီးပို့လို့မရပါဘူး.underground web site တွေမှာ spammer software တွေဝယ်လုုိ့ရတယ်ဗျ။ သိတာလေးပြောတာပါ။
8 ဒီလိုဗျ(ဟီးဟီး) on 28th January 2011, 9:25 am
တည်နေရာ : ရန္ကုန္ေရႊျမိဳ႕ ေတာ္
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2011-01-27
အင်တာနက်အသုံးပြုသူ လူတိုင်းလိုလိုဟာ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသော Spam Mail များ
၀င်ရောက်လာမှုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့် E-Mail Account တစ်ခုကို ရယူသုံးစွဲလိုက်သည်နှင့်တစ်
ပြိုင်နက် မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်း Spam များ ၀င်ရောက်လာတာကို ကြံုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို Spam များဟာ
မည်သည့်နေရာမှ ၀င်ရောက်လာပါသလဲ။ ဘာကြောင့် ထို Spam များ ၀င်ရောက်လာကြပါသလဲ။
Spam ဆိုတာဟာ Electronic Messaging System စနစ်အရ အသံလွှင့်မီဒီယာများ၊ Website များ၊
Electronic စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ ကြော်ငြာပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို Spam များဟာ ကုမ္ပဏီ၏ စေခိုင်းချက်အရ
Spammer (Spam ပို့လွှတ်သူများ) မှ ပို့လွှတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် E-Mail လိပ်စာထောင်ကျော်ကို
ပို့လွှတ်နိုင်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ထို Spam ပို့လွှတ်သူများဟာ Manually အနေဖြင့် ပို့လွှတ်ကြပြီး တစ်ခါတစ်ရံ
မှာတော့ အလိုအလျောက် Spam ပေးပို့နိုင်သော Spambot ကို အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။
Spam ပို့လွှတ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ၎င်းတို့၏ ကြော်ငြာ (သို့မဟုတ်) Message များအား လူအများ
မှတ်မိသိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအနေဖြင့် လူတစ်ယောက်ဟာ အင်တာနက်ပေါ်မှတစ်ဆင့်
E-book စာအုပ်များ ရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်ရာ၌ ကြော်ငြာအသုံးပြုမယ့်အစား Spam များပေးပို့လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
Spam ပေးပို့သူများအနေဖြင့်လည်း စာအုပ်တစ်အုပ်ဝယ်ယူတိုင်း ၁၀ဒေါ်လာခန့်ရရှိပြီး E-Mail တစ်သောင်းဆီသို့
ကြော်ငြာပို့လွှတ်ပါက ဒေါ်လာတစ်သိန်းခန့်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် Spam ပေးပို့သူများဟာ E-Mail လိပ်စာ
ကျွနု်ပ်တို့နေ့စဉ် အသုံးပြုနေသော အင်တာနက်ပေါ်ရှိ Website အချို့ဟာ e-mail ID များအား စုဆောင်းရယူ
ထားကြပြီး Spam ပို့လွွှတ်သူများထံသို့ ထို e-mail လိပ်စာများအား ပြန်လည်ရောင်းချကြပါတယ်။
ထိုအတွက်ကြောင့် မိမိ၏ e-mail လိပ်စာဟာ Spam ပို့လွှတ်သူများထံသို့ရောက်ရှိပြီး Spam ပို့လွှတ်မှုကို
ခံကြရပါတယ်။ ထို Spam Webiste များထဲတွင် သတင်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖိုရမ်များ၊ အင်တာနက် Chatroom များ
from ([You must be registered and logged in to see this link.]
9 Re: Spam mail အကြောင်းသိချင်လို့ [Problem]
Free forum hosting | Computers and Internet | Useful tricks and tips, infos | © PunBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Free forum